नेपाल–सुरीनामबीच दौंत्य सम्बन्ध | Nagarik News - Nepal Republic Media
नेपाल–सुरीनामबीच दौंत्य सम्बन्ध
काठमाडौं – नेपाल र सुरीनामबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ। यो सँगै नेपालको बाह्य सम्बन्ध विश्वका १६३ देशमा विस्तार भएको छ।
दुई पक्षीय सम्बन्ध स्थापनासम्बन्धी संयुक्त दस्तावेजमा आज न्यूयोर्कमा हस्ताक्षर भएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाल र सुरीनामको स्थायी नियोगका उपप्रमुखहरू क्रमशः निर्मलराज काफ्ले र किट्टी स्वीबले उक्त दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल र सुरीनामबीच दुई पक्षीय र बहुपक्षीय तहका साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ असंलग्न आन्दोलन एवं जी ७७ मा सहकार्य गर्न कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो।
प्रकाशित: २६ आश्विन २०७५ १०:५७ शुक्रबार
डा. केसीको प्रश्न : यो गुण्डागर्दी हो ?
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि अनशनरत डा. गोविन्द केसीले आफुलाई जवर्जस्ति ट्रमा सेन्टर पुर्याएको बताउँदै शिक्षण अस्पताल लैजान आग्रह गरेका छन्।
उदयपुरमा सार्वजनिक यातायात सुचारु
सरकारले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै उदयपुरमा सोमबारदेखि लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात सुचारु भएको छ।
खेलकुद विधेयक टेबुल, विधायन समितिमा छलफल
गण्डकी प्रदेशको खेलकुद विकासको लागि प्रदेश सरकारले ल्याउने लागेको ‘गण्डकी खेलकुद विकास ऐन २०७७’ सदनमा टेबुल गरिएको छ। एक महिना लामो संसद अवरुद्ध भएपछि असोजको पहिलो सातादेखि संसद चलेपछि विधयेक सोमबार मात्रै टेबुल गरिएको हो। सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले विधयेक सदनमा पेश गरेकी हुन्।
उदयपुरका प्रतिनिधिसभा सदस्य सुरेशकुमार राई (हिमाल) ले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका गरिव, दलित, बिपन्न तथा बिपतमा परेका नागरिकको घरमा छाना हाल्न जस्तापाताको व्यवस्था गरेका छन्।